နေရပ်လိပ်စာ: အခန်း 402, အမှတ် 2242, အုပ်စု 2, Zhaishang ကျေးရွာ, Xiamen, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 134 0062 3179
E-mail ကို: jack.lim@beatlesbm.com
1 စတုရန်းမီတာခေါင်မိုး 8 ကိုအပိုင်းပိုင်း
: ဆိပ်ကမ်း Loading Xiamen, တရုတ်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, Western Union
ကုန်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများ: FOB, CFR အ, CIF ။
ပိုများသော Synthetic သက်ကယ် Styles:
များအတွက် 1. ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ ကို Artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး:
အစစ်အမှန်တူကြောင်း simulated သဘာဝကသက်ကယ်။
အဆိပ်အတောက် (Eco-friendly မဟုတျဘဲကျန်းမာရေးထိခိုက်စေ) မဟုတ်
Birds ဂိမ်း, ကြွက်နဲ့ worms (မျှစက်ဆုပ်ရွံရှာပေးရတာတွေလုပ်နေရပါတယ်!) စားလို့မရဘူး
2. န့်သတ်ချက်များ artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
ပစ္စည်း: အမြင့်သိပ်သည်းဆ PE
8 ပိုငျးပိုငျးခေါင်မိုး 1 စတုရန်းမီတာကိုဖုံးလွှမ်း
40x50x60cm: ပုံမှန်ကာဗွန် Size ကို
ကာဗွန်အရေအတွက်: 50 ကိုအပိုင်းပိုင်း
3 ဆက်စပ်ပစ္စည်း artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
Ridge Tile ဖောက်သည်များကကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။
4. လျှောက်လွှာ artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
ရှုခင်း, သာယာလှပအစက်အပြောက်, ပန်းခြံများ, တိရစ္ဆာန်ရုံ, အပန်းဖြေဥယျာဉ်များ, အပန်းဖြေ, အားလပ်ရက်ရွာ, ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုရွာ, ဟိုတယ်များ, Villas, ကမ်းခြေ, ရေကူးကန်, အပန်းဖြေစူပါမားကတ်, ကင်ဘား, လယ်ယာ, ဥယြာဉျမြားနှငျ့အခွားသောအရပ်တို့ကိုမ။
5. တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက် artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
artificial သက်ကယ်, ရိုက် stapled သို့မဟုတ်သစ်သား battens, သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်, အထပ်သားသို့မဟုတ်ရေစိုခံတာနဲ့ဗေဒဦးစားပေးပေါ် မူတည်. တစ်ဦးပြည့်စုံအမိုးမိုးစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်လွဲချော်သွားတာနိုင်ပါသည်။
6. တပ်ဆင်ခြင်း tools တွေကို artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
7. Delivery, သင်္ဘောတင်ခ, Incoterms, ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်များ၏နမူနာမူဝါဒအ artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
1) Delivery: 10-30 ရက်အတွင်းလက်ခံရရှိငွေပေးချေပြီးနောက်။ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။
3) Incoterms: FOB, CIF, DDU သို့မဟုတ် DDP ။ အချို့နိုင်ငံများတွင် DDU နှင့် DDP လျှောက်ထားနိုင်ဘူး။
4) ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T, Western Union သို့မဟုတ် Paypal (6% အပိုတာဝန်ခံဝယ်နေဖြင့်ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း)
5) နမူနာမူဝါဒက: အခမဲ့နမူနာ, ဝယ်လက်များကပေးဆောင်ခံရဖို့ဆက်သားတာဝန်ခံ။
8 ကုမ္ပဏီရဲ့နိဒါန်း artificial အုန်းရွက်ခေါင်မိုး :
Xiamen Beatles အဆောက်အဦးပစ္စည်း Co. , Ltd မှကျနော်တို့ဒြပ်သက်ကယ်, ဒြပ်ဝါး, အတုခြံစည်းရိုး, အတုအခေါက်, စသည်တို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်အဘို့အဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ သူတို့က 100% ခြင်း simulation ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့က fireproof နှင့်ရေစိုခံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအသစ်သောမော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစျေးကွက်တရုတ်နိုင်ငံ၌တည်ရှိ၏, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်နိုင်ငံရပ်ခြားစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်စသည်တို့ကိုပြင်ပတွင် WPC မြို့ရိုးကို panel ကိုနှင့်အခင်း, polyester သိုးမွှေး, သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်အတွက်ကုန်သွယ်မှု။
ယခင်: အခင်းအကျင်းခေါင်မိုးများအတွက် Synthetic စေးခြင်းဖြင့်အတုမြက်သက်ကယ်
နောက်တစ်ခု: အပူပိုင်းဒေသအိမ် Decoration များအတွက်အတုအုန်းသက်ငယ်မိုးကွက်များ
အုန်းက Le အဘို့ကောင်းသောအရည်အသွေး Synthetic သက်ကယ်ကွက်များ ...
pa ဖုံးအုပ်အတုပလပ်စတစ်အတုဝါးမြို့ရိုးကို ...